Governments should make data-driven decisions when reopening borders to international travel | eTurboNews | Dị | Njem Akụkọ Banyere Na ntanetị
Ndị gọọmentị kwesịrị ime mkpebi gbasara data mgbe ha mepere emepe maka njem mba ụwa
Data nwere ike ịkwalite iwu na ịmalitegharị njem zuru ụwa ọnụ nke na-ejikwa ihe egwu COVID-19 iji kpuchido ọnụọgụ mmadụ, weghachite ndụ na ịkwalite akụnụba.
Kolọ ọrụ Robert Koch (RKI) kwubiri na ndị njem ọgwụ mgbochi adịghịzi mkpa na mgbasa nke ọrịa a
Canadianlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ndụmọdụ Ọmụma Ahụ na Canada na-atụ aro ka ndị njem ọgwụ mgbochi adịghị mkpa ichepụ iche
Otu ọmụmụ gbasara ahụike ọha na eze kwubiri na usoro abụọ nke ọgwụ mgbochi COVID-19 dị oke irè megide COVID-19 ụdị nchegbu
The Airtù Na-ahụ Maka Transportgbọ njem International (IATA) gbara ndị gọọmentị ume ka ha mee mkpebi data iji jikwaa ihe egwu nke COVID-19 mgbe ịmaliteghachi ókèala na njem mba ụwa. Ebumnuche na-enweghị usoro iche iche nwere ike ime ka njem mba ụwa malitegharịa yana obere ihe ize ndụ nke iwebata COVID-19 na njem njem.
“Data nwere ike ịkwalite iwu na ịmalitegharị njem zuru ụwa ọnụ nke na-achịkwa ihe egwu COVID-19 iji kpuchido ọnụọgụ mmadụ, weghachite ndụ na ịkwalite akụnụba. Anyị na-akpọ ndị gọọmentị G7 na-ezukọ na mbubreyo n’ọnwa a ka ha kwenye na iji data iji hazie atụmatụ na ịhazi nloghachi nke nnwere onwe njem nke dị oke mkpa nye ndị mmadụ, ibi ndụ na azụmaahịa, ”ka Willie Walsh, Director General IATA kwuru.
Ihe akaebe na-aga n'ihu na-egosi na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na-echebe ndị njem pụọ n'ọrịa siri ike na ọnwụ, ma na-ebute obere ihe iwebata nje a na mba ndị na-aga:
Kolọ ọrụ Robert Koch (RKI) kwubiri na ndị njem ọgwụ mgbochi adịghịzi mkpa na mgbasa nke ọrịa a ma ọ bụrụ na ọ bụ nnukwu nsogbu nye ndị German.
Centerlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa na Europe (ECDC) nyere nduzi nwa oge banyere abamuru nke ịgba ọgwụ mgbochi zuru ezu na-ekwu na “a na-achọpụtazi na o yikarịrị ka onye butere ọrịa a na-ebute ọrịa a na-ebute ọrịa a ka ọ dị ala nke ukwuu.”
Centlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa na United States (US CDC) kwuru na “site n'iji ọgwụ mgbochi 90 mee ihe n'ụzọ dị irè, tupu e mee njem, nnwale mgbe ime njem gasịrị, na iche onwe nke ụbọchị 7 na-eweta abamuru ọzọ dị nta.”
Canadianlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ndụmọdụ Ọmụma Ahụ na Canada na-atụ aro ka ndị njem ọgwụ mgbochi adịghị mkpa ichepụ iche.
Otu ọmụmụ gbasara ahụike ọha na eze kwubiri na usoro abụọ nke ọgwụ mgbochi COVID-19 dị oke irè megide COVID-19 iche iche nchegbu.
Ule maka ndị njem na-enweghị ọgwụ mgbochi
Ihe ịma aka bụ ikike nke ihe mgbochi maka njem maka ndị na-enweghị ọgwụ mgbochi nke ga-eme ka mwepu anabataghị. Data sitere na UK NHS gbasara ndị njem mba ofesi na-abata na UK (na-enweghị ntụnyere ọnọdụ ịgba ọgwụ mgbochi) na-egosi na imirikiti ndị njem anaghị enwe ihe egwu maka iwebata okwu COVID-19 mgbe ha rutere
N’agbata 25 Febrụwarị na 5 Mee 2021, emere nnwale 365,895 na ndị njem rutere UK. Ndị a bụ adịghị mma PCR tupu njem. Naanị 2.2% nwalere nke ọma maka ọrịa COVID-19 n'oge usoro iche iche zuru ụwa ọnụ mgbe ha rutere. N'ime ndị a, ihe karịrị ọkara sitere na mba "ndepụta uhie", bụ ndị e weere dị ka nnukwu ihe egwu. Iwepu ha na onu ogugu ga-ebute nnwale nke 1.46%.
N'ime ndị bịara 103,473 si EU (ewepu Ireland), 1.35% anwale dị mma. Mba atọ, Bulgaria, Poland na Romania, weere 60% nke ikpe dị mma.